ေ႐ႊနန္းေတာ္ စိန္ေ႐ႊ ရတနာ လုပ္ငန္းစု တစ္ခုလံုးကို အေမြဆက္ခံမယ့္ မိန္းကေလး – WunYan
ေ႐ႊနန္းေတာ္ စိန္ေ႐ႊ ရတနာ လုပ္ငန္းစု တစ္ခုလံုးကို အေမြဆက္ခံမယ့္ မိန္းကေလး
အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္သမီးျဖစ္သူ မသက္ရတနာေက်ာ္ဝင္းအတြက္ ရည္မွန္းေမွ်ာ္လင့္ထားတာ ေတြက အမ်ားႀကီးျဖစ္တာကို ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဝင္းတို႔ သားအဖ ၂ ေယာက္ အင္တာ ဗ်ဴးကေနေတြ႕ခဲ့ရတယ္။
ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဝင္းနဲ႔ ဇနီးျဖစ္သူေဒါက္တာသက္သက္ခိုင္တို႔ ဆိုတာကလည္း တကယ့္ကို နာမည္ႀကီးထိတ္ထိတ္ႀကဲေတြ။ သူတို႔ရဲ႕သမီးေလးက လန္ဒန္မွာ ဗိသုကာပညာရပ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္တက္ေနတယ္လို႔လည္းသိရပါတယ္။
သမီးျဖစ္သူနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဝင္း ေျပာျပတာက . . .
“တစ္ဦးတည္းေသာသမီးအျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္အမ်ားႀကီးျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ သမီးေလးၾကားမွာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္ကြာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၄ ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရႊနန္းေတာ္စိန္ေရႊရတနာလုပ္ငန္းစုတစ္ခုလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ တို႔ Restructure ျပန္လုပ္ေနပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္ေပါ့။
အဲဒီေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္နဲ႔ သမီး ေလးကို အေမြဆက္ခံဖို႔ အစ္ကိုတို႔ ျပင္ဆင္တယ္။ သမီးက အခုပထမႏွစ္ၿပီးသြားၿပီ။ လန္ဒန္မွာ ေက်ာင္းတက္ေနတယ္။ သမီးအခုေက်ာင္းၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာမိဘအေနနဲ႔ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိသင့္သိ ထိုက္တဲ့ Level တစ္ခုကိုတတ္ေအာင္ေတာ့ အနီးကပ္ Mentalling and Coaching လုပ္ ေပးေန တယ္။ အစ္ကိုတို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေတြက အစ္ကိုတို႔ထက္ပိုၿပီးေတာ္ရမယ္ေလ”လို႔ သိရပါတယ္။
ရွှေနန်းတော် စိန်ရွှေ ရတနာ လုပ်ငန်းစု တစ်ခုလုံးကို အမွေဆက်ခံမယ့် မိန်းကလေး
အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူ မသက်ရတနာကျော်ဝင်းအတွက် ရည်မှန်းမျှော်လင့်ထားတာ တွေက အများကြီးဖြစ်တာကို ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဝင်းတို့ သားအဖ ၂ ယောက် အင်တာ ဗျူးကနေတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဝင်းနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်တို့ ဆိုတာကလည်း တကယ့်ကို နာမည်ကြီးထိတ်ထိတ်ကြဲတွေ။ သူတို့ရဲ့သမီးလေးက လန်ဒန်မှာ ဗိသုကာပညာရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်တက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဝင်း ပြောပြတာက . . .
“တစ်ဦးတည်းသောသမီးအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အများကြီးပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ် လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ သမီးလေးကြားမှာ အသက် ၃၃ နှစ်ကွာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ကျော်၊ ၄ နှစ်လောက်ကစပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွှေနန်းတော်စိန်ရွှေရတနာလုပ်ငန်းစုတစ်ခုလုံးကို ကျွန်တော် တို့ Restructure ပြန်လုပ်နေပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ပေါ့။
အဲဒီကောင်းမွန်တဲ့စနစ်နဲ့ သမီး လေးကို အမွေဆက်ခံဖို့ အစ်ကိုတို့ ပြင်ဆင်တယ်။ သမီးက အခုပထမနှစ်ပြီးသွားပြီ။ လန်ဒန်မှာ ကျောင်းတက်နေတယ်။ သမီးအခုကျောင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာမိဘအနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သိသင့်သိ ထိုက်တဲ့ Level တစ်ခုကိုတတ်အောင်တော့ အနီးကပ် Mentalling and Coaching လုပ် ပေးနေ တယ်။ အစ်ကိုတို့ရဲ့ မျိုးဆက်တွေက အစ်ကိုတို့ထက်ပိုပြီးတော်ရမယ်လေ”လို့ သိရပါတယ်။
သမီး ဖြစ်သူ မသက်ရတနာကျော်ဝင်းကတော့ အနုပညာကို ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာက ထင်ပေါ်ကျော်ကြားချင်တာမျိုး မဟုတ်ဘူးလို့လည်း သိရပါတယ်။
“သမီးက ဒီဇိုင်းဘက်ကိုတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ဖြစ်မယ်။ ညီမအခုလည်း Architecture တက် နေတယ်။ အဲဒါလည်း အနုပညာရယ်၊ စိတ်ရယ်၊ ဒီဇိုင်းရယ် အဲဒီသုံးမျိုး ပေါင်းစပ်ထားတာပေါ့။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီဘက်ကိုရွေးလိုက်တာပေါ့။ အနုပညာကို ဝါသနာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသိရှင်ကြား ဖြစ်ရမယ့် အနုပညာလမ်းကို မသွားချင်ဘူး”လို့ သူမကပြောပြခဲ့ပါတယ်။